Sanatoriums YaseCrimea ukunikela ukuphumula omkhulu kanye nokwelashwa
Phumula eCrimea kwenza umuntu ngamunye eziningi izinhlangano. Sun, ebhishi, yilanga, ukunethezeka komzimba, ngesimo sezulu esihle futhi isibhakabhaka. Kodwa ngokuyinhloko yebo ukuya eCrimea nangolwandle, akusiyo nje enhle. Ososayensi bakholelwa ukuthi yayo Ukwakheka amanzi olwandle siyafana igazi labantu kanye lymph, ngakho uma ukubhukuda kulo ngokusebenzisa isikhumba emzimbeni ukuze akwazi ukufohla izakhi mkhondo nezinye izinto eziwusizo. Iphakamisa ithoni jikelele, uqinise inhliziyo, imithambo yegazi, isikhumba kanye nezinye izitho. Lokhu ikakhulukazi wazizwa e Sea, lapho amanzi has a olinganiselayo usawoti kwengoma.
Ngakho-ke, akumangalisi ukuthi zokungcebeleka YaseCrimea athandwa kakhulu izivakashi, owazi amandla okuphulukisa kule nhlonhlo ocebile. Lapha kukhona ezingaphezu kwezintathu kweshumi amaminerali udaka, esetshenziselwa phezu izinkulungwane ezintathu edlule. Ngokwesibonelo, odakeni of Saki Lake iqukethe izikhathi 10 amavithamini athile futhi ama-amino acid, ngaphezu kwalokho abayithole e odakeni yoLwandle Olufile. Ukuze usebenzise zonke lezi zinhlangothi zokwelapha zakhelwe futhi uthathe izivakashi eziningi boarding izindlu, izibhedlela kanye zokungcebeleka impilo eCrimea.
Peninsula YaseCrimea uhlukile sezwe yayo nasesikhathini ezihlukahlukene izinqubo olunzulu Geological kwenzeke lapha. Ngakho-ke, ecebe kangaka emithonjeni ehlukene ezishisayo nokumbiwa etholakala lapha e semali (mayelana 100). Kukhona amanzi, okuyizinto ujwayelene ukusetshenziswa nsuku zonke, futhi kukhona eyodwa-of-a-enomusa imithombo. Ngokwesibonelo, amanzi etholakala eduze umthombo ubonisa Alushty Suvluh-sous nge okusezingeni ngamandla radionuclides emzimbeni. I amaminerali amanzi eyaziwa best - kuyinto "Crimean" kusiza yezifo ze-isisu, isibindi kanye nezinso, kanye "Feodosiyskaya" ekwelapheni isimiso sezinzwa futhi yomoya engenhla.
Nokho, YaseCrimea sibhedlela nokuvuselelwa usizo, hhayi kuphela lamanzi esiphethu nasodakeni. Amandla okwelapha isimo sezulu eliyingqayizivele kule nhlonhlo. endaweni ikakhulukazi ezahlukene ogwini Southern eCrimea, okuyinto kubhekwa a Mediterranean esincane futhi has izimila nakwezifudumele futhi izilwane zasendle ezimangalisayo. Isimo sezulu ehlobo kushisa (ngo-Agasti izinga lokushisa ifinyelela 40), kodwa lokhu sezulu ngokuvamile iDemo Ukuvuselela ekulondolozeni shawa. Ngokwesiko, samaholidi eCrimea iqala ngo-May ihlala kuze kube maphakathi no-Okthoba. Lena indawo okungcono kakhulu abakhileyo indawo yaseYurophu elingana umswakama emisebeni yelanga.
Uma izimo ezinjalo zemvelo zezulu zokulala YaseCrimea abavakashela hhayi kuphela ithuba elihle kakhulu uphumule, kodwa namanje ukunikeza ithuba elikhulu ukuthi zelashwe futhi sithole amandla. I zokungcebeleka abadumile izindawo eziningi kule nhlonhlo - kuyinto Yalta, Alushta, Simferopol, Sudak, Feodosia futhi Yevpatoria. Waqaphela resort inhlokodolobha eCrimea kuyinto Yalta. Nazi izimiso ezifanele zamazwe omhlaba Massandra lolwandle, owaziwa enhlonhlweni eCrimea sibhedlela "Ubungane", sibhedlela "Foros", nabanye. Abantu abajwayele ukuvakasha kuyona Alushta edonsela ezingasho abafuna ukuhlanganisa kakhulu izinga iholide nge amanani ezingabizi. Kukhona indawo yokungcebeleka enhle kakhulu "Alushta".
Awu ungakhululeka bese baphathwe West eCrimea e Yalta, okuyinto enkulu kunazo zonke spa nasodakeni resort, ikakhulukazi ewusizo izingane. sibhedlela Ovelele "Helios", "Oren-Krim" futhi "Eaglet". Vala Spas eziningi elise Yevpatoria resort Nikolaevka eCrimea. Engxenyeni esempumalanga yaleli enhlonhlweni eyaziwa RESORT uTheodosius (udaka echibini wendawo Adzhigol uthole okuningi indondo yegolide European). Kukhona abadumile ngaphezulu sibhedlela "kwelanga" nethi "TSVKS". Indawo ehlukile ukuphumula futhi welashwe Koktebel, kuyinto ngokuvamile ukuphumula futhi uphumule izinhlobo manje eyaziwa zokudala. Kukholakala ukuthi ubuhle itholakala Koktebel Blue Bay umngane Muses.
I-M-Narina Ihhotela 3 * (Thailand / Phuket): izithombe nokubuyekezwa kwezivakashi, incazelo
Panorama Bungalow Resort El Gouna 4 * (Egypt): ukubuyekezwa, indawo, incazelo ihhotela
Indlu Guest "Laguna" (Lazarevskoye) - indawo holiday kakhulu
Amahlaya aseMelika "Kusukela ku-13 kuya ku-30": abadlali. UJennifer Garner, uJudy Greer nabanye
Stradivarius nomlando wayo
Ingane yakho ayiyena unethemba? Funda indlela ukukhulisa ukuzethemba ukuze ingane
Ithebula le-Glass - imfanelo yanamuhla yomkhosi wetiyi